Kutsvaga Kwaungaita Bhuku Rauri Kuda | Rubatsiro rwepaJW.ORG
Chikamu chakanzi MABHUKU NEZVIMWEWO chepajw.org chine mabhuku akawanda emhando dzakasiyana-siyana, zvekuteerera uye mavhidhiyo. Ita zviri kutaurwa pasi apa kana paine zvauri kutsvaga.
Nyora zita rebhuku kana vhidhiyo
Ona mhando dzakasiyana-siyana dzemafaira echauri kuda
Nyora mashoko aunoziva ari mubhuku racho
Kana uchiziva zita rebhuku kana vhidhiyo kana kuti mamwe mashoko ari pazita racho, tevedzera zviri kutaurwa pasi apa kuti ukurumidze kuriwana.
Enda pakanzi MABHUKU NEZVIMWEWO > MABHUKU UYE MABHUROCHA.
Baya pakanzi Zvose wonyora rimwe remashoko ari pazita rebhuku rauri kutsvaga. Semuenzaniso, kana uri kutsvaga bhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei? nyora kuti “Bhaibheri.” Paunotanga kunyora, pachatanga kubuda mazita emabhuku ane shoko rekuti “Bhaibheri.” Chisarudza bhuku rauri kutsvaga.
Chibaya pakanzi Tsvaga.
Enda pakanzi MABHUKU NEZVIMWEWO > MAGAZINI.
Peji yacho painotanga kubuda, inoratidza magazini 4 achangobuda eMukai! ne4 eNharireyomurindi (Yevoruzhinji) uye magazini 8 achangobuda eNharireyomurindi Yokudzidza. (Mimwe mitauro haina mamwe magazini.) Kuti uwane magazini yauri kutsvaga, tevedzera zviri kutaurwa pasi apa:
Enda pakanzi Magazini Ose wosarudza magazini yauri kuda. Chienda pakanzi Zvitsva wosarudza gore rayo.
Mabhuku kana mavhidhiyo anogona kurongwa nenzira mbiri. Imwe ndeyekuaronga achienda kurudyi uye imwe yacho achidzika.
Baya kapikicha kakaita seaka kuti uone achienda kurudyi. Aya ndomarongerwo anogara akaitwa mabhuku acho.
Marongero aya anoratidza kavha yebhuku racho, mhando yemafaira aunogona kudhaunirodha, uye zita rebhuku rimwe nerimwe. Isa kaarrow kemouse yako pakapikicha kekudhaunirodha (ita zvekubaya kana pari pafoni) kuti uone mhando dzese dzemafaira aunogona kudhaunirodha, somuenzaniso PDF, EPUB kana kuti MP3.
Baya kapikicha kakaita seaka kuti mabhuku arongwe achidzika.
Marongero aya anoratidza kuti bhuku racho rinowanikwa mumhando dzemafaira api, semuenzaniso PDF kana kuti EPUB.
Mamwe mabhuku anowanika ari emabhii makuru. Semuenzaniso ukabaya pakanzi PDF, pachabuda kabhokisi kanoratidza kuti bhuku racho riripo here mumabhii makuru kana kuti kwete.
Baya link yeraunenge uchida kudhaunirodha.
Kana uine bhuku rauri kuda kuverengera paIndaneti, baya kapikicha kakaita seaka. Nyora shoko kana mashoko auri kutsvaga mukabhokisi kachabuda ipapo wobva wabaya pakanzi Tsvaga. Izvi zvichaita kuti chitsauko kana kuti nyaya yauri kutsvaga ikurumidze kubuda.
Tevedzera zviri pasi apa:
Baya pakanzi Advanced Search (Wedzera Kusefa).
Chitika kabhokisi kakanzi Publications (Mabhuku) kari pasi pekamusoro kakanzi Category (Chikamu.)